Warka ka imaanayo Magaalada Madrid ayaa shegay in kooxda ayaa qorsheeyneeso ciyaaryahaano kala duwan oo dhanka weerarka maadama eey dhaawacyo ka qabeen waryahanadeeda sida wararyahnkeeda reer arjantiin higuan iyo kuwa kale.
Dhanka kale Naadiga Real Madrid ayaa dalab u dirsadaty Weerarayhaanka usafta Kooxda Hercule Ee Nelson Valdez , waxayna balan qaadayn Masuuliyiinta Real Madrid in Janury ama June ay keedoonaan Xidigan ku wanaagsan dhalinta Goolasha.
Jose Morinho ayaa dalbanaya Xdigo afka hore ugu ciyaara maadaam ay haatan ku yaradeen Ciyaartoyda afka hore kaga ciyaarto Naadiga ku ciyaarto Garoonka Barnabue Stadium Ee Real Madrid.
Weerayahanka u safta Naadiga Sanadkani kusoo biirtay Horyaalka La Liga Ee Spain oo muujiyay ciyaaro wanaagsan waxuuna Goola badan ka dhaliye Sanadkani Horyaalka, isagoo lagu xasuusto labadii Gool uu kaga badiyay Kooxda ay xifaltamaan Real Madrid Ee Barcelona.
Xidigani ayaa kasoo jeeda Laatiin America waxuuna haystaa Dhalsho Wadanka Praguay, isagoo ka mid noqday xigihii nasiibka uyeehsay inay ka dhax muuqdaan Koobkii Adduunka lagu soo gabagabeeyay Waddanka Koonfur Afrika.
Sidoo kale Naadiga Real Madrid ayaa isku dayeeso inay ceshato Xidiga dhawanahana dhaawaca kasoo kacay Ee Kaka, maadaama ay isku xarbinayaan Kooxaha Machester City iyo Chelsea oo Lacago ku doonaya iyo Manchester United oo amaah ku doonayso.
Ugu danbayntii Valdez ayaa dhaliye 6 Gool 11 kulan uu u saftay Naadigiisa, waana sababtaasi dalabka wayn uu ka helay Kooxda faca weyn Ee Real Madrid, waaxana laga yaabaa in Todobaadyada nagu soo fool leh uu yimaado Garoonka Real Madrid